Ipakethe yezixhobo exabise i $ 15.000 ... nge $ 79 kuphela! | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ipakethe yezixhobo enexabiso elimalunga ne- $ 15.000… nge $ 79 kuphela!
Ngaba uphuhlisa ikhathalogu yakho yezixhobo? Ngaba ufuna ukucoca isitokhwe sakho ngezinto ezisemgangathweni ophezulu kunye nexabiso elifikelelekayo? Ukuba kunjalo, namhlanje siza kwenza kube lula kuwe. Okulandelayo sikuphathela isibonelelo esikhethekileyo sepakethi yokukhuthaza ephezulu yezixhobo zepremiyamu ezahlukeneyo kwaye azixabiswanga kwinto enye kwaye akukho nto ingaphantsi IRandi ye15.000. Nangona kunjalo, ixabiso layo lokumiliselwa ngu IRandi ye79, Okanye yintoni enye, 73 euro. Ukuze ukwazi ukukhuphela, kuya kufuneka undwendwele kuphela idilesi elandelayo. Kodwa yintoni ekhethekileyo ngolu nikelo?
Ngokomgangatho kwaye ngokunxulumene namalungelo osetyenziso, kukho umahluko omkhulu phakathi kwezixhobo zasimahla kunye nezixhobo zasimahla. premium. Oku kuyinyani. Kodwa eyona nto iphambili kuthi esiyifumanayo kwimithombo yeprimiyamu kukuba kwiimeko ezininzi sifumana amaxabiso aphezulu kakhulu esingenako ukujamelana nesiqinisekiso esisenokufuna. Oku kwenza ukuba kubalulekile ukuba sifunde ukukhetha kunye nokukhangela kwezona zinto zibalaseleyo kunye nokwenyusa. Ukusuka kule ndawo yokujonga, kunenzuzo ngakumbi kuthi ukufumana izinto zethu kunye nezixhobo kwiiphakeji, kwii-repertoires okanye iipakethi eziqulathe Uluhlu lwezixhobo ezikumgangatho ophezulu ezinephepha-mvume lokusetyenziswa (ukuxhaphaza urhwebo) kubandakanya. Ungathandabuzi kwaye ulisebenzise eli thuba ngoku ucofa apha.
Ukusuka kwi-Creativos ekwi-Intanethi sizama ukunika ezinye iindlela, Ukubonelela ngolu hlobo lweephakeji kunye nokunikezelwa okukhethekileyo kuhlala kugxila kwicandelo lomgangatho. Akufanele silibale ukuba ekupheleni kosuku ezi zixhobo eziza kuba nefuthe ngqo kumsebenzi wethu, iziphumo zethu kunye nokutywinwa kwethu kobugcisa.
Kutheni le nto kubalulekile ukuba ufunde ukukhetha nokucoca iziqwengana zezixhobo?
Ukuphindaphindwa kwamathuba: Iipakeji zihlala zenziwe ngezixhobo ezahlukeneyo kwaye oku kuguqulela ekusebenziseni okukhulu. Siya kuba nezixhobo ezaneleyo zokuphuhlisa iintlobo ezahlukeneyo zemisebenzi. Ukongeza, ezi phakheji zihlala zijolise kuhlobo oluthile lweprojekthi okanye kwimixholo echazwe kakuhle. Oku kuthetha ukuba siza kuba nesiseko sedatha esakhiwe kakuhle, esilungelelanisiweyo nesingaguquguqukiyo. Ukuba sifuna ukujongana neprojekthi yohlobo oluthile kwaye sinengxowa-mali yezixhobo ezijikeleza lo mxholo, siya kuba namathuba amakhulu kunye nemigca yophuhliso.
Uqoqosho: Kwelinye icala, olu hlobo lokukhetha luya kusinika ukonga okubonakalayo. Ukuba nedama elikhulu lezixhobo kuya kusinceda songe ixesha. Ukuba sifumana ipakethi yezixhobo ezijolise kwisifundo esithile okanye umxholo xa kufuneka sijongane neeprojekthi ezifanayo, siya konga ixesha elichithwe sikhangela izixhobo ezifanelekileyo. Kwelinye icala, kuba ziziiphakheji, isaphulelo asichazwanga kunyuselo. Ngokusengqiqweni, ixabiso lezixhobo kwinqanaba lomntu ngamnye liya kuba ngaphezulu kunexabiso esiza kulifumana ukuba siyazithenga njengeqela.
Ukomelela, ukubanakho ukujongana neeprojekthi kunye nokwenza umahluko njengezinto eziyilayo: Ekugqibeleni, konke oku kuphelela ekubeni kuguqulelwe kubuchule obukhulu, lula kunye namandla okuyila, ekuhambeni kwexesha aya kuthi enze umahluko kwaye abe nefuthe kwisitampu sethu sobungcali.
Namhlanje ndikuzisele into ebalulekileyo kuyo nayiphi na ingcali kwicandelo lethu. Iphakheji enkulu eyahlukileyo echaphazela ubungakanani bomsebenzi wethu kwaye yenziwe yimiba eyahlukeneyo enomdla eya kuthi ixhase umsebenzi wethu njengabaqulunqi:
Izisombululo ezibunjiweyo: Le pakethi mega ibandakanya iseti eyoyikisayo yezixhobo ezivelisiweyo eziya kukuvumela ukuba usebenze kwisisombululo esiphakamileyo kunye nenkcazo kuyo nayiphi na iprojekthi. Ukwahlula ngokwamacandelo, unokufumana ngaphezulu kweephakeji ezingama-450 kunye nezisombululo ezimalunga ne-1000 9000 ezongeziweyo zevektha, zonke zixabisa i- $ XNUMX.
Isisombululo esiphakamileyo: Ukubhalwa kwemiyalezo kuxhomekeke ngqo kumaxwebhu asisiseko asetyenzisiweyo kwinkqubo. Ipakethi ibandakanya ishumi elinesihlanu lomgangatho wokudityaniswa kokudityaniswa okuya kuthi kubonelele ngezona ziphumo zifanelekileyo kulo naluphi na uhlobo lolwakhiwo lwegraphic. Imilinganiselo yala maxwebhu ziiiphikseli ezingama-6000 x 4000 kwaye zixabiswa nge- $ 225. Kwakhona kubandakanywa ii-87 ezongezelelweyo ezikumgangatho ophezulu wee-994 zamaRandi.
Izongezo, iintshukumo, izimbo kunye nokuhlekisa: Ukuba neeplagi kunye neziphumo ezinokuthi zisetyenziswe ngokukhawuleza kunokuba lunomdla kuba kunokusigcina ixesha elininzi kwaye kunike iziphumo ezilungileyo. Apha uya kufumana amanqanaba amanqanaba obuchwephesha kunye nokusetyenziswa kwangoko okunje ngefuthe le-HDR, iintshukumo zokwenziwa okanye i-typographic portraits kunye nefuthe le-watercolor. Le ntengiso ikwabandakanya ukuphinda-phinda kweepakethe ezili-14 zokongeza ezixabisa i-210 yeedola, ukhetho lwe-60 yoyilo lwezikipa ezinexabiso le-900 yeedola kwaye, ukuba oko akwanelanga, ukhetho lokuhlekisa ngezixhasi ezahlukeneyo kunye iimeko.
Iifomathi ze-premium ze-15: Izifundo zepremiyamu zihlala zibonelela ngenqanaba lobunzulu kunye nokuchaneka okungaphezulu kokuzilolonga kwamahhala. Kule pakethi uyakufumana ukhetho lwezifundo ezili-15 eziphambili ezixabisa i $ 197.
9 izixhobo zomsebenzisi ezixabisa i- $ 135: Uyilo lojongano yenye yezona zinto zifunwa ngumyili wewebhu, ukuba neseti yeetemplate ezinokuthi zenziwe kwaye zihleleke zinokusinika izibonelelo ezinkulu xa siphuhlisa iiprojekthi kunye nomsebenzi. Oku kuyakuguqulela kubumdaka obukhulu kwaye ke ngokonga ixesha kunye nezixhobo, kwaye ngenxa yoko emalini.
Iifonti ezi-4 zobungcali kunye nosapho lweTatiana Font kunye neelayisensi zokusebenzisa zibandakanyiwe (ukubonakala okungenasiphelo) ezixabisa i- $ 30.
Izixhobo zewebhu ezili-101 kunye neepakeji zokuprinta exabisa i- $ 1070. Iseti ineentlobo ngeentlobo zeempawu ezicwangcisiweyo ezibonisa ubugcisa kunye nezinye izinto ezinje nge-infographics, amaqhosha okanye iimenyu.
Iiplagi eziyi-109 zeAdobe Photoshop kunye ne-Illustrator exabisa i-1.036 yeedola phakathi kwezixhobo zemodeli ye-3D kunye nophuhliso, izongezo zokongeza ivolumu, ukuqaqamba kunye nobunzulu kwizincoko zethu, kunye neendlela ezahlukeneyo zempembelelo.
Iibhulashi ezingama-67 zeAdobe Photoshop exabisa i- $ 486.
Olunye lwamandla esi sibonelelo luluhlu lwenkululeko olusinika yona. Ngokubandakanya ilayisensi yasimahla yasimahla esinobubanzi bentshukumo. Oku kuthetha ukuba zonke izinto ezifakiwe zinokusetyenziswa kunye Iinjongo zorhwebo ngendlela engenamda (ngaphandle kokuveliswa kwakhona okanye ukubonakala) kwaye inokusetyenziselwa ukuthengisa kwaye isivumele ukuba sifumane imbuyekezo ngqo kwezoqoqosho kubo.
Nantsi isampulu encinci yezixhobo ezenza le ntengiso:
Khuphela le Pakisha yeziXhobo zePremiyamu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Ipakethe yezixhobo enexabiso elimalunga ne- $ 15.000… nge $ 79 kuphela!
Izinto zomtshato: Iipakethe zeVector eziSimahla kunye neZodwa